Shiinaha AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Oil Cartridge Lead Lead and No culus oo bir ah oo leh dhadhan saafi ah iyo warshad uumiga weyn iyo soosaarayaasha | Faallooyinka Alphagreen
Si aad u isticmaasho websaydhka 'Alphagreenvape' waa inaad 21 jir tahay ama ka weyn tahay. Fadlan xaqiiji da'daada kahor intaadan galin goobta.
Waxaan ahay 18 sano ama ka weyn
Waxaan ka yarahay 18
Waxaan u adeegsannaa cookies si aan u hagaajino degelkeenna iyo khibradaada ku daalacanaysa. Markaad sii wadatid daalacashada degelkeena waxaad aqbashaa siyaasadeena cookie
Waan ka xumahay, da'daada lama oggola
AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Saliida Kaydadka Macdanta Lacag La'aanta iyo Bir Nolol Culus oo leh dhadhan saafi ah iyo Uumiga Weyn
Sharax Gaaban ： Waxaan bixinaa AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 kaydadka vape-ga la tuuro. Waxay ku jirtaa dhadhan saafi ah iyo uumiga weyn. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal R&D ah iyo salaan-hore oo wanaagsan, adeegga salaanta ka dib. Alaabtayadu waxay la socdaan jawaab celin wanaagsan iyo tayo sare leh. Waa sharci in tayada ay tahay nolosha. Waxaan rajeynayaa inaan kula shaqeeyo.
FOB Qiimaha: US $ 0.78 - 0.88 / Cadad
Tirada Min.Order: 100 Cadad
Kartida Bixinta: 300,000 Cadad / Bishii
Shuruudaha Bixinta: T / T, PayPal, L / C, D / A, D / P
Soo saare ka mid ah qalabka vape ee Shiinaha, waxaan leenahay dukaanka GMP ee ugu xirfad badan-dukaanka. Waxaan bixinaa oo kaliya tayada sare noocyada kala duwan ee kartridge laakiin sidoo kale noocyo cusub qalin vape la tuuro. Waxaan si joogto ah u horumarinaynaa alaabooyin cusub. Waxaan u fidinaa adeegga OEM / ODM macaamiisheena, waxaad ka mid noqon kartaa iyaga oo ah macmiil sumadeed cad. Waxaa intaa dheer, 5-Stars adeegga macaamiisha waa mashiinkeena kobaca ee warshadaha CBD vape muddada-dheer. Marka laga reebokaydadka iyo qalin vape, sidoo kale bixi vape kaabayaal iyo baakado loo habeeyay.
1. Hordhaca Alaabada ee AT01 CBD / THC Vape kaydadka
Saxaafadda fudud ee AT01 waa qaab dhismeed la mid ah kii hore ee kaydadka noolaha ahaa ee 'AT01', laakiin waa midka cusboonaysiinta marka la barbar dhigo AT01. Sababtoo ah waxay la socotaa xaraf-Fudud Saxaafadeed oo kala duwan. AT01 gulufyada ayaa leh dabool maroojin waxaana loo baahan yahay foosha go'an si loo xiro caarada. AT01 Easy Press kaydadka wuxuu kujiraa daboolka saxaafadda, markaa badbaadi shaqadaada iyo waqtigaaga. Waa ka sahlan tahay oo si fudud.
Caaradku waa mid hufan ama cawlan markii loo eego Laakiin midabada kale ayaa sidoo kale lagu habeyn karaa MOQ oo ah 3,000. Waxaan sidoo kale taageernaa qaabeynta daabacaadda iyo baakadaha.
Waxaa taas ka sii muhiimsan, AT01 kaydadka saxaafadda ee sahlan ayaa leh xaddiga daadashada. Si fudud ayey wax u riixdaa laakiin dib uma furi karto. Sidaa darteed, kama walwalaysid daadinta iyo luminta saliidaada.
2. Heerka Halbeegga (Tilmaamidda) ka AT01 CBD / THC Vape kaydadka
CBD / THC kaydadka vape / Easy Press AT01
Bir / Pyrex galaas / gariiradda dhoobada
Godka saliida laga qaato
4 * 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Size Cabbirka Gaarka ah）
3. Sifada Alaabta iyo Codsiga AT01 CBD / THC Vape kaydadka
——Faaji Saxafi Talo-fudud, ku riix gacanta halkii mashiinka.
——Naa Birta Culus, nooca bilaa rasaasta.
——Ku xidh noocyada kala duwan ee saliida CBD / THC.
——Nolo Design Leak.
—— Qaaciddada Ceramiciga ah ee Gaarka ah
——Taageer Adeegyada OEM / ODM
4. Faahfaahinta wax soo saarka ee AT01 CBD / THC Vape kaydadka
Tip Gabi ahaanba caarada dhalada, caag ma leh. Indhaha ku hay caafimaadkaaga
② Ku dhaji nuuca, si aadan udaadin naqshad.
③ Majiro boosteejo dhexe oo culus (Haddii aad rabto inaad ogaato halista biraha culus, fadlan aqri qodobka hoose), tilmaamo kala duwan oo aad ku dooran karto.
Rate Heerka nuugista saliidda sare, oo ku habboon saliidda dhumucdeeda kala duwan.
Printing Daabacaadda astaanta gaarka ah iyo midabka caarada ee kala duwan, samee sumad kuu gaar ah.
Waa maxay khataraha birta culus ku leeyihiin aadanaha?
Iska jir biraha culus ee sababi kara kansarka
Warka, inta badan waxaan ku arki karnaa in biraha culus ay waxyeello u geysan karaan jirka bini’aadamka, gaar ahaan wasakheynta biraha culus ee deegaanka, taasoo dadka ku keeni karta jirro iyo xitaa inuu keeno kansar. Biraha culusna meel walba oo nolosha ka mid ah, maahan oo keliya wasakheynta deegaanka, xitaa waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay isticmaalaan dumarka saaxiibbada ah waxaa ku jira biro culus. Waa loo qaadan karaa in waxyeelada ay u geysato jirka bini’aadamka ay tahay mid aad u qarsoon, ma sahlana in la ogaado, waxaana jira noocyo badan oo ah biro culus, sidoo kale waxyeelada noocyada kala duwan ee biraha culus ay ku hayaan jirka bini’aadamka sidoo kale way ka duwan yihiin. Ka dib aan u raacno qof walba si aan u aragno khataraha birta culus
Lead, macdanta "lead" waxay ka mid tahay birta culus ee sunta badan ee wasakhda birta culus. Marka uu soo galo jirka bini’aadamka, wuxuu si toos ah u dhaawici doonaa unugyada maskaxda aadanaha, wuxuuna sababi doonaa dib u dhac maskaxeed oo kansar ah, wuxuu u dhintaa maskaxda iyo waallida dadka waayeelka ah, xitaa wuxuu halis u yahay kansarka .
Meerkuriga, cunista meerkurida waxay si toos ah u gashaa beerka, ka dibna waxay dhaawacdaa aragtida maskaxda iyo neerfaha. Biyaha waxaa ku jira xaddi meerkuri ah oo raadadkoodu yar yahay. Haddii ay bedesho biyaha ku jira meerkuriga muddo dheer, waxay sababi doontaa sun joogto ah.
Chromium, Dhaawaca ugu badan ee tooska ahi waa inuu sababo khalkhal maskaxeed iyo kabuubyo addimada ah.
Arsenic, birtan culus waxay sababi kartaa midabka maqaarka iyo keratinization aan caadi ahayn.
Aldehydes waxay sababi kartaa cillad kelyaha iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga. Khatarta ugu muhiimsan waa dhiig kar.
Cobalt waxay u keeni kartaa waxyeelo shucaac maqaarka.
Vanadium, oo saameyn gaar ah ku leh wadnaha bini'aadamka iyo sambabaha, waxay sababi kartaa dheef-shiid kiimikaad aan caadi ahayn.
Daawada, sida cobalt, waxay leedahay waxyeelo shucaac ah maqaarka.
Selenium, dadka miisaanka culus ee aadka u culus wuxuu ku dhacaa cudur naxdin leh.
Thallium waxay sababi kartaa neuropathy badan.
Mangaaniis waxay saameyn ku yeelan kartaa shaqada qanjirka 'thyroid', waana fududahay in la helo hyperthyroidism.
Tin, sida leedhka, waa mid aad sun u ah wuxuuna sababi karaa kansar.
Waxaan aaminsanahay in qof kastaa faham gaar ah u leeyahay halista biraha badan. Biraha culus ayaa waxyeello u leh jirka aadanaha. Dhaawaca ugu daran wuxuu yahay inay sababi karaan kansarka oo ay si toos ah qatar u galinayaan nolosha. Sidaa darteed, waa inaan ukeennaa wasakheyn weyn nolosheena, gaar ahaan wasakhda birta culus ee deegaanka, taas oo sababi karta in birahan culus galaan ciidda iyo biyaha. Markay dadku taabtaan biyahaas iyo carradaas wasakhaysan, waxay sababi doontaa sun joogto ah, taas oo u horseedi doonta dhibaatooyinka qaarkood ee jirka. Cudurro ayaa khatar ku ah nolosha dadka.
Hore: Firfircoonida badhanka AIR ee Batariga Bajaajta Lagu Bedbedeli Karo oo leh 510 Mawjad, Ku habboon Universal CBD / THC / Delta 8 510 Cartridge
Xiga: AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 Cartridge, Ma jiro Laydh Birta culus oo bilaash ah oo leh dhadhan saafi ah iyo uumiga weyn
cbd kaydadka vape
kaydadka dhoobada cbd dhoobada
madhan kaydadka vape
Kaydadka saliidda cbd dib u buuxin kara
Hadafyadeena Naqshadeynta Waa Ergonomic,
ikhtiraac, shaqeynaya, Oo fuliya baahiyaha Macaamiisha.
Telefoonka:: +86 13559135783
Cinwaanka:Dabaqa 5aad, No.3 Dhismaha, Ji An Tai Warshadaha Park, Tian Fu Road, Degmada Bao'an, Shenzhen, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Alaabada Featured, Khariidadda bogga, 510 batari, qalinka vape batari, qalinka vape la tuuro, qalin vape dib u buuxin kara, qalinka cbd vape, cbd saliida la tuuro, Dhammaan Alaabooyinka